Iindaba-Wamkelekile kwi-FIZA TECHNOLOGY
I-HEBEI FIZA TECHNOLOGY CO., LTD ngumvelisi ohlanganiswe ngokupheleleyo kunye nomthengisi. Sigxininisa kwimveliso kunye nokuthunyelwa ngaphandle kweekhemikhali ezisetyenziselwa uluhlu olubanzi lwezicelo kwindawo yokutya, isichumiso, ukutya, amayeza kunye nonyango lwamanzi, njenge-sodium chlorite, i-chlorine dioxide powder, i-chlorine dioxide tablet, i-chlorine dioxide gel, i-chlorine i-dioxide granular, lead nitrate, sulfamic acid, barium carbonate, strontium carbonate, barium nitrate, fire assay crucible, fire assay cupel, Ukuzinikela kwethu ekuthobeleni umthetho kunye nenkqubo yemveliso / yokubonelela ngokubanzi inika abathengi bethu ukuzithemba ukuba iimveliso abazithengayo ziya kudibana nazo. iimfuno ngokungaguquguqukiyo. I-HEBEI FIZA TECHNOLOGY CO ijolise ekuhlangabezeni iimfuno zabathengi bethu, ukwenza igalelo elihle kuluntu lwethu kunye nokukhusela okusingqongileyo. Oku kubonelela ngamathuba ophuhliso kunye nempumelelo eqhubekayo yeekhemikhali kunye nabathengi bethu.
Inkampani yethu inamasebe amaninzi kunye neziseko zemveliso kwilizwe liphela, ezineendlela zemveliso ezivuthiweyo zeekhemikhali eziphilayo kunye namaqela aphezulu kwimveliso. Inkampani yethu ikwasebenza kwimizi-mveliso yemichiza iminyaka emininzi, kwaye umthamo wokuthumela kumazwe angaphandle uhlala uhlala uphambili kwishishini. Ngoku inkampani iphumelele ukusebenza kweshishini kwaye iphumelele ishishini eliphezulu.
Sinezixhobo zemveliso eziphambili kunye netekhnoloji, iindlela zovavanyo ezifanelekileyo kunye nenkqubo yokuqinisekisa umgangatho, ngaphezulu kwe-80% yeemveliso zethu zithunyelwa eYurophu, eMelika, eMzantsi Melika, eMid East, eMzantsi Mpuma Asia, ect.
"Lawula umgangatho ngokulawula inyathelo ngalinye kakuhle, Ukuphucula inkonzo ngokunceda wonke umthengi kakuhle" kukuzibophelela kwethu nokuzibophelela kwethu ixesha elide. Asiboneleli kuphela ngazo zonke iimveliso ezinxulumene noko, kodwa ngexabiso elifanelekileyo, ubuchwephesha obuphambili kunye nenkonzo efanelekileyo yokufumana ukuthembela kwakho.
Sinethemba lokuba sisebenzisana nawe, sakhe ubudlelwane obuhle be-develpoment kunye nokuchuma! Ukuba unayo nayiphi na imfuneko yempahla yemichiza, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi!